Sawirro: Madaxii Jabhadaha iyo dagaalamayaal badan oo laga laayey Al-Shabaab - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Madaxii Jabhadaha iyo dagaalamayaal badan oo laga laayey Al-Shabaab
Sawirro: Madaxii Jabhadaha iyo dagaalamayaal badan oo laga laayey Al-Shabaab
Beledweyne (Caasimada Online) – Ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliya ee Danab ayaa saacadihii lasoo dhaafay gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee HirShabeelle ku dilay xubno badan oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, sida ay baahisay warbaahinta dowladda oo soo xiganeysa saraakiil ka tirsan Danab.
Sarkaalkii ugu sareeyey garabka Jabhadaha ee Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Hiiraan iyo 60 dagaalame oo kale ayaa maanta lagu dilay howlgal qorsheysan, waxaana lasoo bandhigay sawirro muujinaya in ciidanku la wareegeen xarumo ay la haayeen Al-Shabaab.
Ciidanka Danab ayaa howlgalkaan lagu laayey Al-Shabaab waxay ka fuliyeen deegaanada Fiidoow, Dudubley, Kiliga Shiinaha iyo Burcadheer oo ka kala tirsan gobollada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan.
Gaashaanle Xasan Maxamed Cusmaan ayaa hoggaaminayey howlgalkaan oo ururka 7-aad ee kumaandooska Danab ay fuliyeen, sida lagu shaaciyey warbixintaan.
Ciidanka ayaa burburiyey xarumo qaraxyada ay ku farsameyn jireen Al-Shabaab, sidoo kalena ay dadka shacabka ah uga uruursa jireen lacago baad ah, sida laga soo xigtay saraakiisha Danab.
Warbixinta howlgalkaan laguma shaacin magaca sarkaalka sare ee lala dilay dagaalamayaasha badan ee ka tirsanaa Al-Shabaab, balse waxaa la soo bandhigay sawirrada xurumihii kooxda oo gubanaya.